याद गर्नुभएको छ, औषधीको पछाडि हुने रातो धर्काको अर्थ के हो ! जानी राखौं…… – SUDUR MEDIA
एजेन्सी । हामीलाई थाहा छ कि डाक्टरको सल्लाह बिना औषधि खानु हुँदैन । तर सामान्यतया टाउको दु’खे देखि झा’डावा’न्ता हुँदा भने कुन औषधि खाने भन्ने धेरैलाई ‘कन्ठ’ जस्तै भइ सकेको हुन्छ र यस्तो भएमा हामी आँफै पनि औषधि खाने गरेका छौं । यो कुरा पनि थाहा नहुनेहरूका लागि भने विज्ञ ‘मेडिकल सञ्चालक’ हुन् ।
हामी मध्ये कतिपयले याद गरेका हुँदैनौं कि कुनै औषधिमा विशेष संकेत पनि हुन्छ भनेर । तपाईंले एकप्रति ट्याब्लेट औषधिको पछाडि हेर्नुभयो भने अधिकांशमा रातो धर्का देख्न सक्नुहुन्छ, दुखाइ कम गर्ने कडा औषधि र एन्टिबायोटिक्समा विशेष गरी यस्तो संकेत कोरिएको हुन्छ । यिनको खोलमा पनि यस्तो धर्सा हुन्छ ।
यसरी औषधीमा कोरिएको रातो धर्काको हो – डाक्टरको सुझाव वा प्रेसक्रिप्सनबिना खान नहुने । हालै भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यस बारे जानकारी दिँदै जथाभावी औषधि नखान सुझाएको छ । मन्त्रालयको ट्विटरमा ‘रातो धर्का भएका औषधि डाक्टरको सल्लाह बिना नखानुस् । तपाईं जिम्मेवार भए औषधिले पनि राम्रो काम गर्छ ।’
यो पनि – यो हो संसारकै सबैभन्दा फराकिलो सडक, जसको चौडाई २६ लेन छ ! नेपालमा सडक फराकिलो बनाउने अभियान चलिरहेकै सन्दर्भमा संसारकै सबै भन्दा फराकिलो सडकको बारेमा समाचार प्रकाशित भएको छ । अमेरिकाको टेक्सास राज्यस्थित द क्याटी फ्रि वे संसारकै सबैभन्दा फराकिलो सडक मानिएको छ ।
टेक्सास राज्यको ह्युस्टन सहरको द क्याटी फ्रि वे २६ लेनको सडक हो, जसमध्ये १२ मुख्य लेन छन् भने ८ वटा लेन फिडर लेनका रुपमा र ६ वटा लेन म्यानेज लेनका रूपमा छन् । त्यसबाहेक यो सडकसँगै ४ वटा अलग्गै सर्भिस ट्रयाकसमेत निर्माण गरिएका छन् । यो सडकका प्रत्येक लेन ३ दशमलव ७ मिटर चौडा छन् ।
ती लेनको दायाँबायाँ निर्माण गरिएका फुटपाथको चौडाइसमेत ३ मिटर छ । हरेक लेनको बीचमा १ दशमलव २ मिटर ठाउँ खाली छोडिएको छ । यो सडकमा हरेक दिन २ लाख १९ हजार सवारी साधन गुड्छन् । अमेरिकाको सडक विभागका अनुसार यो सडकले आगामी ५० वर्षसम्म सेवा दिन सक्नेछ ।
रुसको चेचेन्या भन्ने स्थानमा बहिनीलाई अन्माउँदा रोएको भन्दै उनका दाजुलाई का रबाहीसहित सजाय दिइएको छ । बहिनीको बिवाहमा मन थाम्न नसकेर रोएको अ भियोगमा ती बहिनीका दाजुलाई सार्वजनिक रुपमा माफी मगाईं स जाय दिइएको हो । एक साता अघि एक भाइरल भिडियोमा बहिनीको बिवाहको अन्तिम समयमा दाजु रोएको देखेपछि माफी मगाइएको थियो । खासमा रुसको चेचेन्यामा विवाहमा रु’नु त्यहाँको परम्परा विपरित मानिन्छ ।
चेचेन्याका स्थानीयले भाइरल भिडियोमा दाजु रोएको देखेपछि त्यस उपर का’रबाहीको माग गरेका थिए । उनीहरुको माग पछि त्यस बिषयमा ठूलो वि’वाद भयो । अन्ततः स्थानीय धार्मिक नेताले उनलाई रो’एकोमा माफी माग्नु पर्ने आदेश सुनाए । चेचेन्यामा हुने विवाहको अर्को अचम्मको कुरा के छ भने बहिनीको बिहेमा दाजु जान पाउँदैनन् । यदि गए उनलाई पनि कारवाही हुन्छ ।
क्वारेन्टिनमा १२ वर्ष कान्छा अर्जुनसँग सँगै बसेकी छन् मलाईका, ‘बुढी’ भनेर कमेन्ट गर्नेलाई मलाइकाले दिइन् मुखभरीको जवाफ….